Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Kambodia » Kedu otu esi aga na Cambodia ọzọ?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Kambodia • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Mmelite nke Njem njem
Ụwa ji nwayọọ nwayọọ na-emepe ebe njem nlegharị anya n'akụkụ niile nke ụwa. Ebumnuche mmeghe a bụ maka ndị ọbịa nwere ọgwụ mgbochi zuru oke. Cambodia bụ obodo kachasị ọhụrụ na-eme ọkwa dị otú ahụ na Sọnde.
Ministri ahụike nke Cambodia na Nọvemba 14, 2021, ewepụtala akwụkwọ akụkọ gọọmentị na-akwado na ọ nweghị ihe achọrọ maka iche iche maka ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi.
Na nkwupụta ahụ, Ministri ahụike gbakwụnyere na n'agbanyeghị na ọ nweghị ihe achọrọ maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, enwere ọrụ ịweta nlele n'aka ndị njem na-abata na-eji ngwa nnwale ngwa ngwa.
Nkwupụta ahụ kọwakwara na, maka ndị na-enwetabeghị ọgwụ mgbochi, achọrọ ụbọchị 14 iche iche na nlele PCR, na-enweghị ihe pụrụ iche achọrọ maka ndị agbagoro ọgwụ mgbochi.
Ministri ahụike wepụtara akwụkwọ akụkọ ahụ na-eso mkpebi nke PM Hun Sen site na ozi olu iji kwụsị ihe ndị chọrọ iche iche nke Cambodia maka ndị njem na-abata, gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke.
Ministri ahụike gbakwụnyere na a ga-ahapụ ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke ma nọpụrụ iche na ebe a na-adọpụ iche, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na ụlọ n'ofe mba ahụ na ndị na-adịghị mma maka COVID-19 ga-ahapụ iche iche site na 15th nke Nọvemba 2021 gaa n'ihu. .
Ntụgharị asụsụ na-akwadoghị nke ihe ọhụrụ achọrọ dị n'okpuru:
Ikike maka ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19 ịbanye Cambodia na-enweghị mkpa iche iche.
1. Ndị njem gbacharala ọgwụ mgbochi ọrịa COVID-19 wee jiri ikuku, oke osimiri na ala bịa Cambodia ga-ebuterịrị:
- Asambodo mgbochi mgbochi, nke na-akwado ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19, ọgwụ zuru oke na asambodo.
- Nnwale COVID-19 (PCR) dị irè maka awa 72 enwetara tupu ọ bịarute Cambodia, nke ikike ahụike obodo nke metụtara ya ghọtara.
Mgbe ha rutere Cambodia, ndị njem ga-enwerịrị nnwale ngwa ngwa (Nnwale ngwa ngwa) COVID-19 n'ọnụ ụzọ mba ahụ wee chere nsonaazụ ule ahụ maka nkeji iri na ise ruo iri abụọ.
Mgbe ọ nwetachara nsonaazụ COVID-19 na-adịghị mma, onye ahụ nwere ike ịga njem n'efu na Cambodia, n'agbanyeghị mpaghara ma ọ bụ mpaghara, ọ chọghịkwa ka ekewapụ ya.
2. Maka ndị njem na-enwetabeghị ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19 ma na-aga Cambodia, a chọrọ ka ha gafee ule COVID-19 site na igwe PCR wee mee usoro iche iche ụbọchị iri na anọ dịka usoro iwu siri dị.
3. A ga-ahapụ ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19 ma na-agba ọgwụ mgbochi ugbu a na ụlọ ọgwụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ n'ofe mba ahụ na ndị na-adịghị mma maka COVID-19 ga-ahapụ iche iche site na Nọvemba 15. 2021 gaa n'ihu.
Ozi ndị ọzọ gbasara njem nlegharị anya na Cambodia.